ဂိုးရယ်ဆိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်ဂိုးရယ်ဆိတ်, Nemorhaedus griseus
↑ Grubb၊ P. (16 November 2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂိုးရယ်ဆိတ်&oldid=716573" မှ ရယူရန်